कर्मचारी सरुवामा सांसदहरुको आक्रोशः १ वर्षमा १६ जना सचिवको सरुवा किन ? - Everest Dainik - News from Nepal
कर्मचारी सरुवामा सांसदहरुको आक्रोशः १ वर्षमा १६ जना सचिवको सरुवा किन ?
काठमाडौँ, भदौ ५ गते । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनभन्दा पनि सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले भनिन्, “एक महीना नहुँदै १६ जना सचिवको यसैबीचमा सरुवा भएको सुन्नका आएको छ, यतिबेला एउटा प्रश्न उठेको छ, एक वर्षमा गर्नुपर्ने काम ती सचिवहरुले एक महीनामै सकेका हुन् वा एक महीनाभित्रै आफू असक्षम भएको प्रमाणित गरेका हुन् वा सम्बन्धित मन्त्रीको रोजाइमा ती सचिवहरु परेनन् वा कार्यसम्पादन सम्झौता आफँैमा मजाक थियो ।”
याे पनि पढ्नुस पुर्वसांसदले बाँडेको १० अर्बको योजना रद्ध
सांसद डा विमला पौडेलले पछिलो समयमा राजनीतिक दलहरुबीच भएको सर्वदलीय बैठक स्वागतयोग्य भएको बताइन् ।